Manchester United oo mushaar sare ku soo jiidanaysa Bruno Fernandes & Inta ay todobaadkii siin doonto oo daaha laga rogay – Gool FM
(Manchester) 16 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo sheegayaa inay qorsheynayso inay la soo wareegto xiddiga naadiga Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes, waxaana la warinayaa inay siin doonto in ka badan 100 kun oo gini todobaadkii.
Ander Herrera ayaa ka tagay garoonka Old Traffrod sidoo kale waxaa suuro-gal ah inuu sidoo kale tago Paul Pogba, macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaana doonaya inuu la soo saxiixto ciyaaryahan kale oo khadka dhexe ah.
Red Devils ayaa la fahamsan yahay inay dalab ku kacaya 50 milyan oo gini ka gudbin doonto Fernandes, taasoo weli 20 milyan ka yar lacagaha ay laacibkan ku dalbanayso Sporting ee ah 70 milyan oo gini.
Yeelkeede, Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in Man United ay doonayso inay xiddigan reer Portugal gacanta ka galiso mushaar dhan 5.5 milyan oo gini sanadkiiba, si ay uga dhaadhiciso inay ku soo biiro kooxda.
Fernandes ayaa dhaliyey 32 gool 53 kulan oo uu u saftay kooxda Sporting xilli ciyaareedkii la soo dhaafay waxaana xiddigan xulka qaranka Portugal uu xagaagan xulkiisa kula guuleystay koobka Nations League.
Man Uited ayaa laacibkan khadka dhexe la saxiixan doonta haddii uu Pogba tago iyo haddii uu joogo labadaba, waxaana xiddigan xulka qaranka Faransiiska bartilmaameedsanaya kooxaha Real Madrid, Juventus iyo Paris Saint-Germain.
Red Devils waxa ay la soo saxiixatay xagaagan kaliya Daniel James oo ka soo qaateen Swansea City iyo Aaron Wan-Bissaka oo ay kala soo wareegeen Crystal Palace.
DEG DEG: Matthijs de Ligt oo ka dagay Magaalada Turin si uu u dhamaystiro ku biiristiisa kooxda Juventus... + SAWIRRO